Tontolon’ny Asam-panjakana 2017 : Nahatratra 17 000 ny mpiasam-panjakana matotoa voasivana -
AccueilRaharaham-pirenenaTontolon’ny Asam-panjakana 2017 : Nahatratra 17 000 ny mpiasam-panjakana matotoa voasivana
Isan’ireo ministera manana andraikitra lehibe eo amin’ny fampandrosoana ny tontolon’ny Asam-panjakana eto Madagasikara ny ministeran’ny Asam-panjakana, asa ary ny lalàna sosialy. Ankoatra ireo fandraisana fepetra momba ny diplaoma hosoka, isan’ny nisongadina ihany koa ny fanafoanana ireo mpiasam-panjakana matotoa tamin’ity taona 2017 ity.
Fanilihana ireo mpiasam-panjakana matotoa
Isan’ny asa nifantohana ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny ministeran’ny Asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy tarihan’ny minisitra Maharate Jean de Dieu ny fanafoanana ireo mpiasam-panjakana matotoa tamin’ity taona ity, ho fanatsarana ny tontolon’ny asam-panjakana. Satria ny mpiasam-panjakana no anisany hianteheran’ny fanjakana mijoro, ka izany indrindra no anisany hirosoana amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny asam-panjakana. Fantatra fa mahatratra 17 000 ireo mpiasam-panjakana matotoa eny anivon’ireo ministera tsirairay. Noho izany, atao amin’ny alalan’ny “virement bancaire” ny karaman’ireo mpiasa entina hitiliana azy ireo sy fanamorana ihany koa ny fanivanana ny mpiasam-panjakana tena izy. Hisy noho izany, ny tetikasa fametrahana fanaraha-maso ny isan’ny mpiasam-panjakana eny anivon’ny minisitera tsirairay, izay hiainga amin’ny taratasy fandraisana karama (fichier solde). Amin’ny alalan’io tetikasa io, dia ny isa ara-batana mihitsy no jerena mandritra ny fidinana ifotony. Ankoatra izay, dia jerena tsirairay ihany koa ny andraikitra sahanin’io olona io. Marihina moa fa, ao anatin’ny sehatra iray ahafahana manatanteraka ny politika ankapoben’ny fitondrana, araka ny faritan’ny Filoha Rajaonarimampianina Hery izy ity, entina hanabeazana ny olom-pirenena.
Fanarenana ny Asam-panjakana
Isan’ny asa nisongadina ho an’ny ministeran’ny Asam-panjakana, asa ary ny lalàna sosialy tamin’ity taona ity ihany koa ny fandraisan’ny minisitra Maharante Jean De Dieu, ireo delegasiona Maraokana, notarihan’ny Masoivoho Maraokana Mohamed Benjilani, teny amin’ny biraony 67ha. Fihaonana izay nifantoka indrindra tamin’ny fijerena ifotony ny fampiharana ireo fifanarahana miisa 22 efa vita sonia nandritry ny fandalovan’ny Mpanjakana Mohamed VI teto Madagasikara ny volana novambra 2016. Tafiditra amin’izany ny tolo-tanana entin’ny firenena Maraokana momba ny fanarenana ny Asam-panjakana. Izy ireo izay efa manana traikefa amin’ny lafin’ny fanatsarana ny Asam-panjakana sy ny mikasika ny fanofanana ny Mpiasam-panjakana mba hahomby kokoa. Izay mifanandrify indrindra amin’ny fanamby napetraky ny eo anivon’ny minisitera misahana ny Asam-panjakana satria ao anatin’ny firosoana amin’ilay fitantanana ny Raharaham-panjakana sy ny fampandrosoana ny ministera amin’izao. Misy ny ezaka maro nampidirina tamin’izany, tahaka ny fametrahana ny logiciel SIGRHE (Système Informatisé de Gestion des Ressources Humaines de l’Etat), izay hita fa tena hahomby amin’ny fitantanana ny Mpiasam-panjakana. Fantatra moa fa hisy ny fiaraha-miasa amin’ny Vondrona Eropeana amin’ny fametrahana azy io, amin’ny alalan’ny tetikasa PREA, izay haharitra 6 taona, mba hanamora kokoa ny fitantanana ny mpiasa eo anivon’ny Fanjakana malagasy amin’io Logiciel io.
Nandray fepetra amin’ny diplaoma hosoka
Vidina amin’ny vidiny 200 000 ariary hatramin’ny 300 000 ariary ny diplaoma ao amin’ny tambazotran- tserasera “facebook”. Efa nisy mihitsy mpiasam-panjakana 200 nahatratrarana diplaoma hosoka. Manoloana izay indrindra hentitra ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ity ministera ity mahakasika ny fampiasana ny diplaoma hosoka ary nandray fepetra mifanaraka amin’izany. Ka hametraka sampandraharaha iray misahana ny fanaraha-maso ny fampidirana ho mpiasam-panjakana. Amin’ny alalan’io sampandraharaha io no ahafantarana, na hosoka, na tsia ny diplaoma ampiasain’ny olona iray. ka tsy ho tara be intsony ny hahalalana ireo mampiasa izany. Ary amin’izay fotoana izay, manome ny lisitr’ireo afaka ny sekoly tsy miankina, ary atao “reluire” izany, ka ny sekoly mihitsy no manatitra izany ao amin’ny minisitera, ary manao sonia, araka ny fanazavany avy eo anivon’ny ministera. Izay fiaraha-miasa amin’ny firenena Dubai, ity farany izay hanome fitaovana fitiliana ireo diplaoma ka hahafantarana na hosoka na tsia. Marihina moa fa na efa tafiditra miasa aza ny olona iray, misy foana ny fanaraha-maso ataon’ny tompon’andraikitra, amin’ny alalan’ny fanavaozana ny fifanarahana arak’asa mba hialana amin’ny fisian’ny olona mampiasa ny diplaoma hosoka.
Orinasa tsy miankina telo tratra tsy nanara-dalàna
Ao anatin’ny fampanarahan-dalàna ny asa eto Madagasikara, nisy ny fidinana ifotony nataon’ny ministeran’ny Asam-panjakana tany Toamasina, nijerena ireo toeram-piasan’ny orinasa tsy miankina, izay mampiasa olona betsaka tany an-toerana. Ny mikasika ny fahadiovana any anaty orinasa no tena nojerena tamin’izany, ankoatra ny fepetra mahakasika ny fampanarahan-dalàna hataon’ilay orinasa eo anatrehan’ny lalàna misy, mifehy ny asa. Nandritra izany no nahitana fa orinasa tsy miankina telo mpanamboatra savony, mpamokatra menaka amin’ny sakafo; mpanondrana lavanila no tra-tehaka tsy nanara-dalàna. Na mandoa latsakemboka amin’ny Cnaps aza ireto orinasa ireto, dia hita fa tsy mahafeno fepetra sy tsy manara-dalàna. Ankoatra ireo orinasa mihiboka izay mitarika hasemporana, eo koa ny loto manodidina ny toeram-piasana. Ny hafa kosa dia mbola raisina ho “journalière” ihany ny fanakamarana ireo mpiasa, na dia efa niasa tao aman-taona aza. Etsy ankilany, kely dia kely ny fetran’ny karama raisina isam-bolana. Hetsika izay tena nankasitrahan’ireo mpiasa ho fitsinjovana azy ireo na eo amin’ny lafiny fahasalamana izany na eo amin’ny lafiny karama.
Havadika lalàna ny politikam-pirenena momba ny asa
Isan’ny asa nifantohan’ny ministera ny Asam-panjakana ihany koa tamin’ity taona ity, ny famadihana ny pôlitikam-pirenena momba ny asa ho lalàna. Satria be dia be ny lesoka hita amin’ny tontolon’ny asa eto Madagasikara. Ankoatra ny mari-karama ambany dia ambany, indrindra ho an’ny mpiasa tsy miankina amin’ny fanjakana, isan’ny olana lehibe ihany koa ny resaka Cnaps. Misy olona efa miasa mandritra 30 taona tsy misitrika izany, hany ka, rehefa hisotro ronono tsy mahazo izay fisotroan-dronono izay. Etsy ankilany koa, ny fitsaboana mahazo ireo mpiasa amin’ny sehatra tsy miankina izay tena tsy ara-dalàna tanteraka. Fa ny olana tena goavana dia ny fampiasana zaza tsy ampy taona amin’ny endriny rehetra, toy ny fivarotatena, ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany. ara-dalàna tanteraka. Fa ny olana tena goavana dia ny fampiasana zaza tsy ampy taona amin’ny endriny rehetra, toy ny fivarotatena, ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany.